Hydrangea izimbali zivamile kakhulu, kungatholakala kaningi engadini, kodwa futhi egumbini, zikhula kahle. Iningi lazo etshalwa endaweni evulekile, njengoba lesi sihlahla esikhulu has izimbali ngesimo amabhola. izimbali potted hydrangea elakhelwe ezikhulayo isikhala avaliwe, kepha uma unakekelwa kahle, banalo imbali engengaphansi aluhlaza futhi enhle kunalawo likhule ngaphandle.
Imithetho eyisisekelo ngokunakekela
Kakhulu izimbali ezinhle hydrangea kungunyaka izimbali kuqala. Khona-ke kancane kancane baba ezincane, futhi amahlumela zinwetshwe kakhulu, okwenza imbali ilahlekelwa sikhalo salo. Ukuze ube eside bajabula labo izimbali, udinga isikhuthazo kula isitshalo ngonyaka.
Njenganoma iyiphi unesitshalo, hydrangea kudinga ukuhambisana izimo zokukhanya, kulondolozwe izinga lokushisa ukhululekile futhi elilungile nomswakama, ukuthambisa esifike ngesikhathi futhi eyanele. Ukuze hydrangea izimbali babe aluhlaza kanye ukuqhakaza isikhathi eside, lesi sitshalo kuyadingeka ukudala indawo ukhululekile. Nakuba, lapho luyokhula izitshalo, zikhona lezi zindlela ezilandelayo sokuthuthuka - ziphuzo zazihluzwa, ekuqaleni izimbali kanye cuttings, bese zom futhi, ekugcineni, inkathi lokuphumula. Uma nigcina ngokufanele, bese isitshalo sakho ngeke eziqhakaza ebusika.
Ngokuba ukuthuthukiswa egcwele isitshalo kuyadingeka ukuze balondoloze izinga lokushisa esifundeni 18-22 degrees, lapho sitshalo esikhathini ukuphumula, izinga lokushisa kufanele ibe ngu- degree angaba ngu-8. Njengoba Hydrangea uthanda ukukhanya, bese basibeka efulethini kangcono iningizimu noma impumalanga uhlangothi.
Lesi simila uthanda ukuthambisa okuhle, kodwa hhayi ubaluleke kakhulu kangakanani pereuvlazhnyat inhlabathi izimo egumbini. Ukunisela kungcono ukuthatha amanzi ezithambile njengoba hydrangea ezinzima kuletha ezimbi kakhulu. Ebusika, kungcono ukusebenzisa amanzi kwancibilika. Kuyadingeka ukuba silondoloze nomswakama lomoya, ngokusebenzisa izitshalo gqwa sishaye.
Ukuze uthole okukhulu ngaphezulu ukukhula izimbali izitshalo kudingeka bondliwe kabili ngenyanga. Ngenxa yale njongo manyolo organic nokumbiwa. Ammonium nitrate kanye superphosphate ezinhle ukwengeza esikhathini izimbali, njengoba zishukumisa ke.
Indlela ejwayeleke kakhulu ukuveza hydrangea kuyinto division of the ehlathini, amakamelo uhlobo olufanayo okusakazwa indlela esiphelweni. Isibambo, okuyinto kukhethwe zokugaya, kufanele kube ngazimbili ezimbili noma ezintathu amaqabunga. Ukuze uthole okuhle kucedvwa cuttings itshalwe ngokwanele ezingu-20, kodwa lokhu isitshalo ngeke eziqhakaza kuze ngonyaka olandelayo. Phakathi ukuphindwaphindwa engadini hydrangea bungatholakala, ukuze iqhakazile onyakeni wokuqala.
Repot isitshalo engcono ngemva kokuba anqunywe, wadabula inkathi lokuphumula. Cuttings ezisuka kahle, kangakanani ukufakelwa ibalulekile.
Sekukonke kukhona angaba yizinkulungwane 35 izinhlobonhlobo hydrangeas emhlabeni. I plant ngempela eziqinile futhi abandayo ukumelana futhi ikhula kahle ekhanyayo ngokuya sezulu sethu esipholile.
Izinhlobonhlobo ezivame kakhulu hydrangea:
- Hydrangea zemithi, kungokukaJehova esiyize, okuyinto ifinyelela ukuphakama 1.5 amamitha, othanda onothile futhi akakubekezeleli frost. Izinhlobonhlobo ngokuvamile esekhulile kwezinhlobo - kuyinto Annabelle, grandiflora, Sterilis.
- Hydrangea paniculata futhi isihlahla esikhulu endalweni ongafinyelela-5 ubude. izinhlobonhlobo eziningi lolu hlobo abe nephunga elimnandi kakhulu, izinhlobo okwandile ezifana Kyushu, Umbala Symphony.
- Cherenkov hydrangea noma izinkampani kungaba afinyelela amamitha angama-25 ubude, lesi sitshalo kuyelapha emthunzini, kuyilapho amanye izinhlobo photophilous. Isetshenziselwa le arbors ukubhalisa ezihlukahlukene futhi izindonga.